သည်လိုအဖြစ်တွေရပ်စေချင်ပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » သည်လိုအဖြစ်တွေရပ်စေချင်ပြီ	21
Posted by Sine Sant on Dec 17, 2014 in Creative Writing | 21 comments
ပြောရဦးမယ် လေးပေါက် ရေ . .
တိုင်တော တယ်လို့ တော့မထင်စေချင်ပါဘူး ။
မြန်မာပြည်ကြီးမှာ လုလု အချစ်ဆုံးအတွယ်တာရဆုံး
မြို့ ဟာ ရွှေမန်းမြို့ကြီးပါပဲ ။
ဖုန်ထူ တဲ့မြို့ ၊ ပူအိုက်တဲ့မြို့၊ မြန်မာ့ရိုးရာဓလေ့စရိုတွေကိုထိန်သိမ်း
ထားတဲ့မြို့၊ ရာဇဝင်ထဲမှာ ထီးနန်းတည်ထားတဲ့မြို့ ၊
” ဒါဟာ ဒို့ မြန်မာ “ဆိုပြီးဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားနိုင်လောက်အောင်
ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေပေါများလှတဲ့မြို့ ကို လုလုချစ်တယ် မြတ်နိုးတယ် ။ တစ်နှစ်မှာ နှစ်ခေါက်လောက်တော့
ရောက်အောင်သွားတဲ့မြို့ ပါ ။
မန္တလေးရောက်တိုင်း မဟာမြတ်မုနိ ဘုရားကို မမောနိုင်မပမ်း
နိုင်ပဲအရောက်သွားဖူး ရတာလည်း ပီတိ တမျိုးခံစားရလို့ ရင်ထဲ
အေးချမ်းရတယ်။ ဈေးချို ကိုလည်းတပတ်လောက်တော့ပတ်ချင်
သေးတယ် ။ အချိန်ရ ရင်ရသလို ဦးပိန်တံတားပေါ် လမ်းလျှောက်ချင် သေးတာ။ နန်းတွင်းထဲလည်းဝင်လေ့လာ ချင်သေးတယ် ။ ရွှေမန်းမြို့ ရဲ့ ဘယ်နေရာကို ကြည့်ကြည့် အတိတ်က လွမ်းမောဖွယ်ရာ ပုံရိပ်တွေကို တခေါက်ပြန်လည် ခံစား
ကြည့်မိနေ တာ ရွှေမန်းမြို့ ကြီးကို ချစ်လွန်းလို့ ပေါ့ လေးပေါက်ရယ် ။
ဒါပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ တွင်းရောက်ခဲ့တုန်းကတော့
အချိန်မရတာက တစ်ကြောင်း ၊ မြစ်ကြီးနားက နေ ရထား စီးခဲ့ရလို့ ခရီးပမ်းလွန်းတာက တစ်ကြောင်း အဲ့လို အကြောင်းပေါင်းများစွာကြောင့် မြို့ ထဲလည် ချင်တာတောင် မလည် ခဲ့ရဘူး ။ ဒါနဲ့ လုလု စီးလာတဲ့ ရထား က မန်းမြို့ နားရောက်ခါ နီးမြို့ ဟောင်း ဘူတာ လောက် ကစပြီး ကယ်ရီ သမား တွေခြေချင်းလိမ်အောင် ခရီးသည်တွေ လိုက်ခေါ် နေကြပြီ ။ ခဏနေတော့ လုလု နားကို ကယ်ရီသမား တစ်ယောက်ရောက်လာတယ်
” ဘယ်သွားမှာလဲ ကယ်ရီ ငှားဦးမလား ” စသည် ဖြစ်
လာမေး ကြတာပေါ့ ။ လုလု ကလည်းတစ်ယောက်တည်း သယ်လာတဲ့ အထုပ်တွေက များ နဲ့ ငှားမယ်ပေါ့ ။ ဘူတာ ကနေ ကျွဲဆည်ကန် ကားဝင်းထိ ဘယ်ဈေးလဲ ဆိုတော့ ” ” ” “နှစ်ထောင်ပဲပေးပါ “တဲ့သြော် နှစ်ထောင်ဆိုပဲဆ်ုတော့ မဆိုးဘူးပေါ့ ဒါနဲ့ ငှားမယ် ပြောလိုက်ရော ။ သူတို့ ကယ်ရီသမား အချင်းပဲပြောနေကြတာ ကြားရသလောက်ကတော့ “သည် ညီမလေး လိုက်မယ်တဲ့” ဆိုပြီး ။
အဲဒါနဲ့ ဘူတာရောက်ရထားဆိုက်တော့ လူတစ်ယောက်က လုလု အထုပ်တွေ ဆွဲချသွားတယ် ။ လုလု ကလည်း ” အစ်ကို့ ကိုငှားထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဘာလို့ ကျမ အထုပ်တွေ လာသယ် နေတာလဲ ” လို့ မေးလိုက်တော့ သူက “ဟုတ်ပါတယ် ညီမလေး အခုန ကငှားလိုက်တဲ့ လူ ကနောက်ထပ် ခရီးသည်တွေ လိုက်ရှာနေလို့ ကျနော့်ကို
လွဲပေးလိုက်လို့ ပါ ” တဲ့သြော် ပြီးတာပါပဲ ဆိုပြီး သူ့ နောက်က အပြေးလိုက်ရသေးတာ ၊ မတော် လုလု အထုပ်တွေ ဘယ်မ သွားမန်း မသိလိုက်မှာစိုး ရသေးစိုးရသေးတယ်လေ ။
ဘူတာအပြင်လည်းရောက်ရော taxi တစ်စီးပေါ်အထုပ်တွေသွား တင်နေတော့
“ခုန အစ်ကိုတို့ ပြောတာ ဆိုင်ကယ် ဆို ” လို့ မေးလိုက်တော့
အဲ့လူ ကအင်းမလုပ်အဲ မလုပ်နဲ့” ရတယ် ညီမလေး သည်ကားပေါ်ပဲ တက်လိုက်တော့ ”
တဲ့ အဲ့လူ ကိုသေချာအောင်မေးလိုက်သေးတယ် နှစ်ထောင်ပဲနော် လို့။” ဟုတ်တယ် ညီးမလေး
နှစ်ထောင်ပဲ ဟို ကားမောင်းတဲ့အစ်ကို ကိုပေးလိုက်ပါ “တဲ့
“အထုပ်သယ်, ခ ခြောက်ထောင် ” တဲ့
“ဘာ ကျမ သယ်ခိုင်းတာမှမဟုတ်တာ ရှင် ပြောတော့ ဆိုင်ကယ်ဆို ပြီးအခု ကားပေါ်လာတင်တယ် ပြီးတော့ အထုပ်သယ်ခ ခြောက်ထောင် ဟုတ်လား ”
“ဟုတ်ပါတယ် ကျတော်က အထုပ်ပဲသယ်ပေးတာပါ ညီမ မယုံရင် တခြားသူတွေကို လိုက်မေးကြည့်လို့ ရပါတယ် ” တဲ့ လုလု ဘယ်သူ့ ကိုသွားမေးရမှာလဲ
အုပ်စု ဖွဲ့ လိမ်စားနေကြတာ ကို ၊ စိတ်က ပျက်နေပြီ မတတ်နိုင်တော့ ဘူး ကိုယ့်အထုပ်နဲ့ ကို အလိမ်ပဲ ခံလိုက်တော့မယ် ဆိုပြီး ခြောက်ထောင်က များလွန်းတယ် လျော့ဦး ဆိုတာနဲ့ငါးထောင်တဲ့ သည်ထက် ထပ် မလျော့နိုင်တော့ဘူးတဲ့ 
ကဲ မတတ်နိုင်တော့ဘူး ရော့ ငါးထောင် ပေါ့ ။
နေပူပူ ဖုန်ထူထူ ထဲမှာ လွမ်းတာတွေ သတိရတာတွေ လည်ချင်ပတ်ချင် စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူး
ပိုက်ဆံကြောင့်မဟုတ်ဘဲ တသက်နဲ့တကိုယ် ဒီတစ်ခါ အလိမ် ခံ လိုက်ရလို့ စိတ်ကတော်တော် တိုနေပြီ သိသိကြီးနဲ့ ဆိုတော့ လေ။
အဲဒါ နဲ့ မပြီးသေးဘူး ကားဝင်းလည်းရောက်ရော ကားခ ရှစ်ထောင် တဲ့ နေပါဦး ခုနပြော တော့ နှစ်ထောင် ဆို
“အဲ့ဒါ ဟိုလူ ပြောတဲ့ သူ့ ဈေးပါတဲ့ ကျနော့ ကားက နှစ်ထောင် မရဘူး”တဲ့ “မကျေနပ်ရင် ကားနံပတ် မှတ်ပြီး သွားတိုင်လို့ ရတယ်”တဲ့။ တော်ပြီတော်ပြီ ဘာမှလည်းမမှတ်ချင်ဘူး ဘယ်သူ့ ကိုမှလည်းသွားမတိုင်ချင်ဘူး ။
တစ်ခါ ကနေနှစ်ခါ ဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ အ ,လို့ ခံရတာ လို့ ပဲ မှတ်လိုက်တော့မယ် ဆိုပြီး ရှစ်ထောင်ထုတ်ပေးခဲ့တယ်။
အဲဒါ ပဲ ဘူတာကြီးနဲ့ ကျွဲဆည်ကန်ကားဝင်း ကြားမှာ
တစ်သောင်း သုံးထောင် ပေးခဲ့ရတာ တခါမှ မကြုံဖူးဘူး ။
လုလု ချစ်တဲ့ရွှေမန်းမြို့ မှာ ဒီလိုအုပ်စုဖွဲ့ ပြီးလိမ်နေကြတာ ကိုကြုံ လိုက်ရတော့ အရမ်းစိတ်ပျက်သွားတယ် ။ ဒါကြီးမား တဲ့လိမ်လည် မှုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်မြို့ ကိုရောက်လာတဲ့ ခရီးသွားပြည်သူတွေကို ခရီးရောက်မဆိုက် အမောဆို့ အောင် လုပ် တာတော့ သရုပ်ပျက်လွန်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။
ရွှေမန်းမြို့ မှမဟုတ်ပါဘူး တခြားဘယ်မြို့ မှာမဆို
ရွှေမန်းမြို့ မှာမှမဟုတ်ပါဘူး တခြားဘယ်မြို့ မှာမှ သည်လိုလူလိမ်တွေ မရှိစေချင်ဘူး ။ အသေးစားလိမ်လည်မှုက နေ ဖြေရှင်းလို့ မရတဲ့ လိမ်လည်မှုတွေ ဖြစ်လာမှာကို စိုးရိမ် ပါတယ် ။ လူတစ်ယောက်က လိမ်တတ်ပြီ ဆိုရင် သူမလုပ်ရဲတဲ့ အရာတခြားဘာမှမရှိဘူးလို့ သိထားပါတယ် ။
နိုင်ငံတော် အနေနဲ့ ဆင်းရဲ မွဲသေမှု ကို ပ ပျောက်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်
စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲကို အကြောင်းပြုပြီး ဖြစ်ပေါ်
လာတဲ့ ရာဇဝတ်မှု တွေလျော့နဲ လာနိုင်မယ်လို့ မျော်လင့်မိပါတယ် ။ lulu (တောင်ကြီး)
View all posts by Sine Sant →	Blog
တောင်ပေါ်သား says: မန်းဘူတာမှာ ဒါတွေက ကြာပါပြီ ၊ ကျနော်ကတော့ အိတ်တစ်လုံးနဲ့ သွားတဲ့ကောင်ဆိုတော့ ကိစ္စမရှိ ၊ ကားဂိတ် ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီတွေ ဆိုးတာကလည်း တစ်မျိုး၊ အင်းးး အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးမှာ တက္ကစီသမားတွေ ဗိုလ်ကျတာလည်းရှိသေး ၊
Kaung Kin Pyar says: အသက်ငယ်ငယ် မိန်းခလေးတစ်ယောက်ထဲလဲ ဖြစ်လေတော့ သူတို့ ဂွင်တွေ့သွားတာပါပဲ လုလုရေ…
ခင်ဇော် says: ဟမ်မငေးးး
ကားဝင်းတိုင်း အဲလိုဖြစ်နေတာ အရင်ကတည်းက။
အနောက်ကားကြီးဝင်း ဆို ပိုဆိုးတာ။
ကောင်လေး တစ်ယောက်တည်း ဆိုရင် တည်းခိုခန်းပါ ဇွတ်တည်းခိုင်းတာ။
ရေချိုးလို့လည်း ရတယ်၊ ဒိုက်ထိုးလို့လည်း ရတယ် တို့။
ထမင်းလည်း ကျွေးတယ် ၊ နင်းလည်း ပေးတယ်တို့။
နောက်ခါ ဆို သတိထားး
မျက်နှာထားတင်းတင်းထားပြီး လာကြိုမှာ အိမ်က လာကြိုမှာလို့ သာ တွင်တွင်ပြော။
ကိုယ့် အထုတ်ဆွဲရင် စူးစူးဝါးဝါးအော်ပြီး ပြန်ချခိုင်းးး
တပြားမှ မပေးဘူးဆိုတာ အရင် ပြောထားးး အော်ပြော။
ဦးကျောက်ခဲ says: အဟိ… ကျောက်စ်တို့ ကျောင်းသားဘဝ သာစည်မှာရထားခေါင်းတွဲပြောင်းရင်…
“စမ်းရေမှာ အပန်းဖြေမယ် ၊ ရေချိုးမယ် ဒိုက်ထိုးမယ်လေ” … ဆိုပြီး ပေါ်တင်ဆွယ်သဗျ…
အဲဒါ… ကျောက်စ်နဲ့ဆရာ ဘယ်ကောင်တွေသွားလဲ သိချင်လို့မေးလိုက်တော့…
“မနေ့က ကိုကျောက်ခဲတို့ အုပ်စုကို ကျနော်ပို့ပေးလိုက်တာ ဆရာရဲ့” … တဲ့…
နာမည်အလွဲသုံးစားလုပ်သွားတဲ့ ကျောင်းနေဘက် သူငယ်ချင်းကောင်းတွေ…
ခင်ဇော် says: အဟီးဟီးးး
ဦးကျောက်ခဲက ရေချိုးသွားလား ဒိုက်ထိုးသွားလား တဲ့??
lu lu says: ဖျားဖျား ဦးကျောက်
ရေလည်းသွားမကူးနဲ့ရေနစ်မှာစိုးလို့ 
ဒိုက်လည်းသွားမထိုးနဲ့ ခါးနာ မှာစိုး လို့ 
ဦးကျောက်ခဲ says: မူလပထမ အော်ရီဂျင်နယ်ကျောက်စ်က သာစည်မှာ…
ရေမချိုးဘူး … ရေစေးတွေ ၊ ချိုးပြီးရင် ကပ်စေးစေးနဲ့…
ဒိုက်မထိုးဘူး … ထိုးဇယာလား… ဝေါ့…
Was this answer helpful?LikeDislike 36
Zaw Lwin says: လေယာဉ်ကွင်းလည်း လေယာဉ်ကွင်း မို့ လို့ 
ကားကွင်းလည်း ကားကွင်း မို့ လို့ 
အဲ့ဒီ လို မလိမ့်တပါတ်ရိုက်ပြီး လုပ်စားနေကြတာပါ။
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: တစ်နပ်စားနည်းနဲ့ လုပ်စားကြတာတွေပေါ့ လုလုရယ်
ဆိုတော့. . .
ဒီတစ်ခေါက်က အထာမသိလို့အောင့်သက်သက်နဲ့ အလိမ်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့
နောက်တစ်ခါ ဒါမျိုး ထပ် အလိမ်ခံရရင် လုလု ညံ့ရာကျလိမ့်မယ်။
ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား စည်ကား သွားလာနေကြတဲ့ ဘယ်မြို့မှာမဆို ဒါမျိုး လိမ်ဆင်တွေရှိသလားဆိုတာ
There are no mistake, only lessons.
lu lu says: အဲ့တုန်းက တော့ အ လို့ 
နောက်တခါ မညံ့ အောင်သတိထား ရတာပေါ့
ခင် ခ says: ဖတ်ရတာနဲ့တင်ရင်မောမိပါပေါ့။
ကျုပ်လည်း မန်းစပြောင်းခါစ ကျုပ်တို့ဇနီးမောင်နှံ ရန်ကုန်ကနေ ရထားနဲ့ မန်းလာတာပေါ့။
အခုလိုဘဲမြို့ဟောင်းဘူတာရောက်တော့ အမတို့ကားဌားမလား မေးကြလေရဲ့လေ၊
အဲဒီတုန်းကမန်းတက္ကသိုလ်ထဲသွားတည်းရမှာဆိုတော့ ဘူတာကြီးကဆိုနီးလေတာမို့ ကားမဌားဘူး ဆိုက်ကားနဲ့သွားမယ်ပြောလိုက်တယ်၊
ဟော မန်းဘူတာလဲရောက်ရော ကျုပ်တို့ရဲ့လက်ဆွဲအိတ်ကို လူတစ်ယောက်ကလာဆွဲလို့ ဘာလုပ်တာလဲမေးတော့ အကိုတို့မန်းတက္ကသိုလ်ကို ဆိုက်ကားနဲ့သွားမယ်လို့ပြောတာမို့ လာကြိုတာတဲ့၊ တယ်ဟုတ်တဲ့ မန်း ပါလားပေါ့စိတ်ထဲက ချီးကျုးမိသေးဗျာ။ ဒါနဲ့ဆိုက်ကားတစ်စီးပေါ် ကျုပ်တို့ကို တင်ပေးလဲပြီးရော ပစ္စည်းသယ်လိုက်ပို့ခတစ်ထောင်တဲ့ တောင်းတယ်လေ၊ ဇနီးသည်က စကားမများချင်လို့ တစ်ထောင်ထုတ်ပေးလိုက်ပေမယ် ကျုပ်စိတ်ထဲတော့ ဘ၀င်ကမကျချင်ဖူးပေါ့ဗျာ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဆိုက်ကားခမှ တစ်ထောင်ဘဲပေးရတာလေ။ အဲလို အဲလို တွေ လုပ်စားနေတဲ့သူတွေကတော့ ဟိုတုန်းထဲကရှိနေတယ်လေ၊ အခုထိမပျောက်နိုင်သေးပါဘူး လုလုရေ။ ကျုပ်ကြုံခဲ့တာ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်ကျော်ကနော်။
uncle gyi says: ဒါတွေကတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဒါးတိုင်တခုပါပဲ
kai says: နောက်ဆို ဖုံးကင်မရာလေးထုတ်.. ပေါ်တင်သာရိုက်..။
လန့်ဖြန့်ပြီး.. အသေသတ်မလား… မသိ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7172
kyeemite says: .ရန်ကုန်ကားဂိတ်တွေမှာလည်းအတူတူပါပဲလေ..
.မိန်ကလေးတစ်ယောက်ထဲမို့လူလည်ကျသွားကြတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9257
ဦးကြောင်ကြီး says: ကချင်သဗုံမ လုလုကို ခြစ်ချဉ်လိုက်တာ..
lu lu says: ကြောက်တယ် လို့ 
Shwe Ei says: -ခေတ်ကိုက အပေါက်ဆိုးမှ အန်ဒရယ်ကင်းသလိုဖစ်နေတယ်..
-သများတောင် ဟိုနေ့က ဘတ်စ်ကားပေါ် ပဆံတောင်း တဲ့ကိုရင်ကို ဒါ့ပုံရိုက်ဖို့ ကြံနေတုန်း ဖုန်းဝင်လာတာ ကွက်တိဖစ်သွားလို့ အစီအစဉ်ပျက်သွားတယ်။
-လူလိမ်တွေကို မှတ်တမ်းတင်လို့ ကိုယ့်လာရန်ရှာရင်တော့ ဘေးကကြည့်နေတဲ့လူလဲ လူကောင်းမဟုတ်လို့ဘဲ :-/
Ma Ma says: မရိုးဆန်းသော ဖြစ်ရပ်များပေ့ါနော်။
အားနာပြီး ပေးသွားတဲ့သူ၊ ပြီးပြီးရောဆိုပြီး ပေးသွားတဲ့သူတွေများတော့….
အဲလိုမှမဟုတ်ပဲ မျက်နှာထားတင်းတင်းထားပြီး တန်သလောက်ပဲ ပေးရင်လည်း လက်ခံသွားကြတာပဲ။
lu lu says: အလကားရ ရင် အကုန်လိုချင်ကြတာပေါ့
Paing Lay says: အနော်ကတော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရတာ အကျင့်ပါနေလို့လားမသိဘူး။ ဘယ်မြို့ပဲ ရောက်ရောက် လက်ဖက်ရည်ဆိုင် အရင်ထိုင်ပြီးမှသွားတာ အကျင့်ပါနေပြီ။ လာပြီး အီးရော ဖောရော လုပ်ရင်လည်း မျက်နှာလေဖြတ်သလို Ever Smile လုပ်ထားလိုက်တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 565
lu lu says: သင်ထားရဦး မှာပါလား နော်